Shanghai Bohua nche akụrụngwa Co., Ltd. enwetara ISO 9001: 2015 asambodo njikwa njikwa mma, ISO14001: 2004 njikwa njikwa gburugburu ebe obibi, OHSAS18001: 2007 ọrụ nlekọta ahụike na nchekwa njikwa, Shanghai "AAA" ụlọ ọrụ kredit na ụlọ ọrụ Shanghai dị elu.
Ejirila ANS z358.1-2014 nke America, European en60335-12012 + a11: 2014 na China Classification Society gbalaga anya na-asacha anya; ihe nkpuchi a ka enyere site na gb2626-2006 kn95 na European Union FFP2 n'oge oge ntiwapụ; E gosiputara uwe nchekwa ahụike en 14126: 2003 / AC: 2004.
Ebuputela ngwa ahịa ụlọ ọrụ ahụ na Russia, United States, Japan, Kazakhstan, Middle East, Africa na mba ndị ọzọ. Ọ bụ onye na-azụ ahịa PetroChina na Sinopec, ma na-ebunye ndị ahịa ngwaahịa na mmanụ ala, kemịkalụ, nri na ihe ọ beụverageụ, ọgwụ, arụ ụgbọ mmiri, ngwa elektrọnik, ike anyanwụ na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. O nwere ihe karịrị 4000 ndị mmekọ, gụnyere imekọ ihe ọnụ ikpe nke nnukwu Chinese mba na ụwa na-ama ụdị Dị ka PetroChina, Sinopec, Coca Cola, Shell lubricants, Honeywell, wdg
Companylọ ọrụ ahụ nwere ụda R & D, mmepụta, ahịa, usoro njikwa ọrụ, na talent, teknụzụ, akụrụngwa, ozi na uru ndị ọzọ pụtara ìhè, iji nye gị ngwaahịa dị elu, nchekwa na asọmpi; anyị ga-eme mgbalị na-enweghị atụ ịnye gị ngwaahịa na ọrụ dị elu, zuru oke ma dị mma.